Hagitaanka COVID-19 ee karantiilka iyo isa-soocista - King County
Talaalka COVID-19 Go’doon iyo karantiil
Hagitaanka COVID-19 ee karantiilka iyo isa-soocista
Miyaa lagaa helay caabuqa COVID-19, ma la yeelatay xiriir dhow qof qaba COVID-19, ama ma leedahay calaamadaha COVID-19? Macluumaadka boggaan ayaa kaa caawin doona inaad fahamto haddii aad u baahan tahay inaad is karantiisho iyo talaabooyinka kale ee lagaaga baahanyahay in aad qaado.
Fadlan akhri qaamuuska ee sharraxaadda ereyada lagu isticmaalay boggaan.
Hoos ka dooro gelida si aad u aragto qeexis
Xiriirka dhow waxaa loola jeedaa in qof qaba COVID-19 u jirsato 6 fiit (2 mitir) isku geyn 15 daqiiqo ama ka badan 24-saac gudahood.
Waxaa laguugu tirinayaa inaad la la kulantay COVID-19 haddii aad u jirsato wax ka yar 6 fiit (2 mitir) qof cudurka qaba isku geyn 15 daqiiqo ama ka badan 24-saac gudahood.
Maaskaro tayo sare leh, oo si fiican u le’eg
Maaskaro si fiican kuu le’eg waa mid si fiican u daboosha sanka iyo afka. fiilo sanka ku wareegsan ayaa abuurta xiris buuxda. Maaskarada tayada sare leh waa N95, KN95, ama nooca KF94. Nooca ku xiga ee ugu tayada sarreeya maaskarooyinka qallitaanka kuwaasoo buuxiya heerka ama shuruuda qaran (ASTM 2/3). Haddii aadan heli karin mid ka mid ah waji-xidhyadaan, xidho maaskaro la tuuri karo oo ay ka hooseyso maaskaro dhar ah.
Isa-soocid macnaheedu waa ka fogaanshaha dhammaan dadka aan qabin COVID-19, xitaa gurigaaga gudihiisa.
Karantiil macnaheedu waa in aad joogtid guriga iyada oo aan cidina ku soo booqan, kana fog dadka gurigaaga ka baxsan. Ha tagin shaqada, dugsiga, ama goobaha bulshada. Haddii ay suurtagal tahay, ka fogow dadka qoyskaaga ka tirsan ee khatarta sare ugu jira COVID-19 (aan la tallaalin, dadka da'da ah, ama kuwa qaba xaalado caafimaad).
Waxaa laguugu xisaabinaya qof dhameystiray talaalka marka aad qaadato irbada xoojinta ama aad qaadatay tallaalka labaad ee Pfizer ama Moderna in ka yar 5 bilood ka hor ama hal tallaal Johnson & Johnson in ka yar 2 bilood ka hor.
Carruurta da'doodu ka yar tahay 12 sano waxaa loo tixgelinaya inay dhameysteen talaalka marka ay qaataan 2 irbad oo Pfizer ah.
MA tihid qof dhamaystiray marka aad tahay qof:
Aan la tallaalin
Aan helin irbada labaad ee Pfizer/Moderna, ama
Aan helin xoojiye ka dib qaadashada irbada labaad ee Pfizer/Moderna ugu yaraan 5 bilood ka hor ama tallaalka Johnson & Johnson ugu yaraan 2 bilood ka hor
Maxaa sameynaysaa haddii…
Waxaan xiriir dhow la yeeshay qof qaba COVID-19
Hadii aadan dhamaystirin tallaalka ama xoojiyaha:
Is karantiil 5 maalmood oo is baar maalinta 5’aad. Waa muhiim in la is baaro maalinta 5’aad haddii ay suurtagal tahay.
Haddii lagaa waayo cudurka ama aanad lahayn calaamado 5 maalmood ka dib, waad ka bixi kartaa gurigaaga. Waa inaad sii wadaa xidhashada maaskaro tayo sare leh, oo si fiican u daboolan marka aad joogtid hareeraha dadka kale 5 maalmood oo dheeraad ah (wadarta 10 maalmood).
Haddii aadan is karantiili karin, waa inaad xirato maaskaro tayo sare leh, oo si wanaagsan u daboolan marka aad joogtid hareeraha dadka kale 10 maalmood ka dib soo-qaadista, ka fogow kuwa kale, ka fogow meelaha dadku ku badan yihiin oo ka fogow dadka khatarta sare ugu jira COVID-19.
Haddii aad dhamestirtay tallaalka iyo xoojinta:
Uma baahnid inaad is karantiishid.
Ku xiro maaskaro tayo sare leh oo si fiican kuu le’eg hareeraha dadka kale 10 maalmood ka dib soo-qaadista.
Is baar maalinta 5’aad, haddii ay suurtagal tahay.
La soco calaamadaha. Haddii aad isku aragto calaamado, isla markiiba gal karantiil ilaa aad ka hesho natiijada baarista COVID-19 oo wax laga helin.
Waxaa layga helay COVID-19, ama waxa aan leeyahay calaamado ka dib markii aan la kulmay
Qof kasta oo laga helo cudurka waa inuu is karantiilaa ugu yaraan 5 maalmood. Maalinta 1aad waa maalinta ugu horreysa oo buuxda ka dib marka ay calaamadahaagu soo baxaan ama maalinta aad hesho natiijada baaritaanka. Karantiilka 10 ka maalmood ayaa ah ikhtiyaarka ugu badbaadada fiican maadaama ay weli suurtogal tahay in la faafiyo COVID-19 5 maalin ka dib (inkasta oo faafidaas aanan u dhaweyn faafida marka aad ku jirtay 5’ta maalin ee ugu horeysay).
5 maalmood ka dib, haddii aadan lahayn calaamado ama calaamaduhu kaa tagayaan, waxaad ka bixi kartaa gurigaaga. HA ka bixin gurigaaga haddii aad weli qandho qabto. Waa inaad sii wadaa ku xirashada maaskaro tayo sare leh oo si fiican kuu le’eg hareeraha dadka kale 5 maalmood oo dheeraad ah (tootal ahaan 10 maalmood).
Khiyaar: Haddii aad awood u leedahay shaybaar (istijaabin) oo aad rabto inaad isbaarto taxadar dheer aawadiis, waa inaad isbaartaa dhamaadka 5-ta maalmood ee xilliga karantiilka adoo isticmaalaya tijaabada antigen-ka degdega ah haddii ay suurtagal tahay. Haddii baaritaankaagu uu yahay mid togan (lagaa helay), waa inaad sii waddaa is go'doominta 5 kale oo maalmood (guud ahaan 10). haddii nadiijada tijaabadaadu ay tahay mid taban (laga waayey). Waa awoodaa inaad ku soo laabato shaqada oo waa inaad sii wadaa xidhashada maaskaro sida ugu habboon markaad dadka kale la joogto.
Haddii calaamadahaagu ay sii dhaafaan 5 maalmood, sii wad karantiilka ilaa calaamadahaagu ka soo roonaadaan oo aadan laheyn qandho.
Waxaan la-kulmay COVID-19 waxaana la iga helay caabuqa 90-kii maalmood ee la soo dhaafay
Uma baahnid inaad gasho karantiil ama guriga joogtid ilaa aad isku aragto calaamado.
La soco calaamadaha ilaa 10 maalmood kadib markaad xiriir dhow la yeelatay qof qaba COVID-19.
Haddii aad isku aragto calaamado isla markiiba gooni isu-sooc oo is baar. Sii wad joogista guriga ilaa aad ka ogaanayso natiijada. Ku Xiro maaskaro si fiican kuu le’eg hareeraha dadka kale.
Xiro maaskaro si fiican kuu le’eg 10 maalmood oo buuxda mar kasta oo aad la joogto dadka kale gudaha gurigaaga ama meel fagaare ah. Ha tagin meelaha aadan awoodin inaad xirato maaskaro.
Waxaan la noolahay qof laga helay caabuqa COVID-19:
Iska ilaali inaad isku qol waqti kula qaadato qofkaas ilaa 10 maalmood ka dib marka astaamihiisa bilaabmeen.
Marka aad labadiinuba isku qol ku jirtaan, ka dhig waqti yar, ka fogow qofka 6 fiit (2 mitir), waana inaad labadiinuba xirataan maaskaro.
Gacmaha si joogta ah u dhaq.
Iska baar COVID-19. Hadii lagaa helo, raac tilmaamaha ku jira kingcounty.gov/nextsteps (Bog ku qoran Ingiriis kaliya).
Fiiro u yeelo calaamado. Haddii aad isku aragto wax calaamado ah, isla markiiba gal karantiil oo is baar.
Raac hagida karantiilka lagu xusay "Waxaan xiriir dhow la yeeshay qof qaba COVID-19".
Waxaa layga helay caabuqa intaan karantiil ku jiray
Haddii lagaa helo caabuqa mudada karantiilka, waxaad u baahan doontaa inaad bilawdo karantiil cusub:
Gal karantiil muddo 5 maalmood ah. (Maalinta 1 waa maalinta ugu horeysa ee buuxda ka dib markii calaamadahaagu soo baxaan ama aad hesho natiijada baaristaada.)
5 maalmood ka dib, haddii aadan lahayn astaamo ama calaamaduhu kaa tagayaan, waxaad ka bixi kartaa gurigaaga. HA ka bixin gurigaaga haddii aad weli qandho qabto. Sii wad inaad ku xirato maaskaro tayo sare leh, oo si fiican kuu le’eg hareeraha dadka kale 5 maalmood oo dheeraad ah (tootal ahaan 10 maalmood).
Waxaan u baahanahay caawimaad si aan u helo meel aan ku galo karantiil
Xarumaha karantiilku waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan meel ammaan ah, nadiif ah, oo raaxo leh oo ay joogi karaan dadka aan si badbaado leh isu karantiili karin ama aan isku karantiili karin gurigooda, ama aan haysan guri. Goobahaani waa bilaash cid walbana waa u sir, joogitaankaadana lalama wadaagi doono maamul ka baxsan waaxda Caafimaadka Dadweynaha.
Si laguugu xidho adeegyadaan, wac Xarunta Wicitaanka COVID-19 ee Degmada King 206-477-3977 laga bilaabo 8 am ilaa 10 pm. maalin kasta si loo eego haddii adeegyada karantiilka ay yihiin kuwa kugu habboon. Sheeg luqadaada si laguugu xiro turjumaan.
Halkan ka baro wax badan adeegyada karantiilka ee degmada King (Boggaan waa Ingiriis keliyah).
Haddii aad tahay xirfadle bixiya daryeel caafimaad oo u maleynaya ama og inuu qaaday COVID-19, waa inaad ogeysiisaa qofka aad u shaqeysid ka dibna raac isla talooyinka kor ku xusan si aad u ogaato marka aad dib u bilaabi karto la joogitaanka dadka kale ee ka baxsan goobta shaqada. Marka aad shaqada ku soo laaban karto waxay ku xiran tahay arrimo iyo xaalado kala duwan—waydii cidda aad u shaqayso hagid.
Wixii macluumaad ku saabsan goorta aad shaqada ku noqon karto, eeg: Shuruudaha Kusoo Soo Laabashada Shaqada ee Shaqaalaha Daryeelka Caafimaadka bixiya ee qaba caabuqa SARS-CoV-2 (Hagaha Ku-meel-gaarka ah ee CDC) (Bogga waa Ingiriis kaliya).
Amarka iyo Wareegtada Sargaalka Caafimaadka Deegaanka
Laga bilaabo Maarso 28, 2020, shakhsiyaadka laga helay COVID-19 ama muujinaya calaamadaha COVID-19 oo leh natiijadii baaritaanka oo la sugayo waa inay ku jiraan karantiil si looga hortago faafitaan dheeraad ah, sida kor lagu sharaxay. Shakhsiyaadka u hoggaansami waaya waxa laga yaabaa in la xiro xiris aan ikhtiyaar ahayn sida waafaqsan maamulka caafimaadka dadweynaha ee hoos yimaada RCW 70.05.070 (2)-(3) iyo WAC 246-100-036 (3) (bogag ku qoran Ingiriis kaliya).
Wixii macluumaad dheeri ah, Faahfaahin dheeraad a, ka eeg amarka oo dhammaystiran, oo ay ku jiraan sharuudaha karantiilka.
Waxa la sameeyo kadib baaritaan COVID-19 (macluumaadka hadii lagaa helo ama lagaa waayo caabuqa) (Bog ku qoran Ingiriis kaliya)
CDC: CDC Gooni Go'aan Haddii Aad jiran tahay (Bog ku qoran Ingiriis kaliya)
CDC: Sidey Tahay U Qaado Tallaalkaaga (Bog ku qoran Ingiriis kaliya)
DOH: Isa-soocista iyo Karantiilka loogu talagalay COVID-19 (Bog ku qoran Ingiriis kaliya)
Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah, wac Xarunta Wicitaanka COVID-19 ee Degmada King 206-477-3977 laga bilaabo 8 a.m. ilaa 7 p.m. U sheeg luuqaddaada si aad laguugu xiro turjumaan.
Link/share our site at kingcounty.gov/covid/quarantine/somali